कसरी चिन्ने सक्कली मेमोरी कार्ड ! – IT Pana
March 17, 2016 Ajay Sharma Tips & Trick 0
स्मार्ट फोनदेखि ट्याबलेट र क्यामेरासम्म मेमोरी कार्ड अनिवार्य जस्तै बनेको छ । ट्याबलेट, स्मार्टफोन, क्यामेरा र अन्य मोबाइल डिभाइसका लागि अलग अलग मेमोरी कार्ड अर्थात एसडी कार्ड राखिन्छ । एसडी कार्ड सुरक्षित छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन सकेन भने त्यो छिट्टै विग्रिने वा काम नगर्ने हुन सक्छ । यहाँ मोमोरी कार्ड सक्कली हो कि नक्कली भनेर थाहा पाउने तरिका चर्चा गरिएको छ ।
यसरी थाहा पाउनुहोस् तपाईंको मेमोरी कार्ड सक्कली कि नक्कली:
गुगल प्लेबाट तपाईंले आफ्नो स्मार्टफोनमा एसडी इनसाइट (Sd Inshight) नामको एप डाउनलोड गर्न सक्नु हुन्छ । यसले तपाईंलाई कार्ड नक्कली हो कि सक्कली भनेर तत्काल थाहा दिन्छ । यो डाउनलोड गरेपछि तपाईंको कार्ड स्मार्टफोनमा राख्नुस् ।
यसले तपाईंको कार्ड बनाउने कम्पनी, यसमा रहेको स्टोरेज क्षमता, कार्ड बनेको मिति तथा अन्य जानकारी दिन्छ । यदि तपाईंको कार्ड राख्ना साथ एपले “Sd Insight” भन्ने म्यासेज आयो भने बुझ्नुहोस् तपाईंको कार्डमा केही खराबी छ या यो नक्कली कार्ड हो । त्यस्तै पुनः चेक गर्दा तपाईंको स्क्रिनमा “Origin is uknown” देखियो भने बुझ्नुस् तपाईंको कार्ड नक्कली हो । कार्ड किन्ने समयमा प्याकिङ गरिएको हुन्छ । तर यस्ता प्याकिङ गरिएका कार्डसमेत नक्कली हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ । यो एपको मद्दतले तपाईंलाई नक्कली कार्ड चिन्न सघाउछ ।
एप डाउलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
कसरी चिन्ने सक्कली मेमोरी कार्ड
मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउनु हुन्छ ? यसरी बचाउनुहोस् डाटा